अर्थ संसार: 9/1/11 - 10/1/11
श्रीमान्–श्रीमती छुट्टिएको देखाएर सेयर बढाइएको छ
भाष्करमणि ज्ञवाली,कार्यकारी निर्देशक
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
२०४२ सालमा तृतीय श्रेणीको अधिकृतमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा प्रवेश गरेका भाष्करमणि ज्ञवालीले बैंकका महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । आठ वर्ष विदेशी विनिमय विभागमा रहेर अधिकांश समय विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काममा खर्चेका ज्ञवाली १२ वर्ष कानुन विभागमा रही १ सयभन्दा बढी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशनको मस्यौदा गरेको बताउँछन् । यो अवधिमा उनले एसियन क्लियरिङ युनियनको इन्चार्जका रूपमा समेत काम गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकका रुरूपमा कार्यरत ज्ञवाली केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पनि हुन् । घरजग्गामा भएको अनधिकृत लगानीलाई बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या ठान्ने ज्ञवाली वित्तीय प्रणालीमा भने खासै समस्या देख्दैनन् । वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालकमा आपराधिक मनोवृत्ति विकसित हुँदै जानुले वित्तीय क्षेत्र प्रताडित हुनुपरेको उनको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले अनुगमन र निरीक्षणमा कडाइ गरेपछि समाजमा ‘बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ’ र वित्तीय क्षेत्रमा ‘जनताको निक्षेप लिएर खेलबाड गर्नुहँदैन’ भन्ने सन्देश गएको मान्ने ज्ञवालीसँग नजिकिँदो दसैं र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कारोबारका बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाईं र संवाददाता यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :
विगत वर्षहरूमा नोटको अभाव झेलिरहेकोमा यो वर्ष राष्ट्र बैंकले नोट अभाव नहुने भन्दै आएको छ । सरकारी राहत कार्यक्रममा पनि नयाँ नोट वितरण परेकाले सहज हुन लागेको हो ?
अघिल्लो वर्ष नोटबाट राजाको तस्बिर हटाइएको अवस्थामा नयाँ नोट छापिएर आउन ढिला भएकाले केही समस्या भएको हो । तर, यो वर्ष नोट पर्याप्त रहेकाले अभाव हुँदैन । यसपटक दसैँका लागि सुकिला र नयाँसहित ३० अर्ब रुपैयाँ नोट बजारमा पठाउँछांै । गत वर्ष २२ अर्बबराबरका नोट पठाएका थियौ । यो वर्ष ३० प्रतिशतले माग बढ्ने अनुमान गरी थप ८ अर्ब रुपैयाँ बढी पठाउन लागेका हांै ।
राष्ट्र बैंकका थापाथली, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा, धनगढी, नेपालगन्जबाट सर्वसाधारणले नोट साट्न सक्नेछन् । थापाथलीमा तीनवटा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि मागेअनुरूप नोट उपलब्ध गराएकाले सर्वसाधारणले आफ्नो खाता भएको संस्थाबाट पनि नयाँ नोट लिन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई नोट प्रयोग गर्दा पानीमा नभिजाउन, मैलो नबनाउन र नपट्याउन पनि आग्रह गरिरहेको छ । नोट हाम्रो आफ्नै सम्पति हो, यसले हामी जति छिटो नोट मैलो बनाउँछौं, त्यति चाँडो नयाँ छाप्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको भार सम्पूर्ण नेपालीले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजाको तस्बिरअंकित नोटले धेरै विवाद भयो । यी नोट व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंक चुप देखिन्छ नि !
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले चार वर्षभित्रमा पूर्वराजाको तस्बिरअंकित नोटलाई बजारबाट पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यो समयसीमा पुगेन, दुर्गमका जनतालाई असुविधा भयो भनेपछि हाललाई स्थगित गरेका छौं । उपयुक्त समय आएपछि जनतामा यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरी पुनः सुचारु गर्छौं र त्यस्ता नोट बजारबाट खिच्छौं ।
दसैँमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले रकम पाउलान् त ?
सम्झना फाइनान्स लिक्विडेसनमा गइसकेकाले केन्द्रीय बैंकले पनि केही गर्न सक्दैन । पुनरावेदन अदालत पाटनले जाँचबुझ अधिकारी नियुक्त गरिसकेकाले जाँचबुझ अधिकारीमार्फत केही रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ । परिस्थिति अनुकूल बन्यो भने सायद सम्झनाका निक्षेपकर्ताले पनि केही रकम फिर्ता पाउँछन् । त्यस्तै, समस्याग्रस्त युनाइटेड विकास बैंक बारामा निक्षेपकर्ता थोरै भएकाले खासै समस्या छैन । गोर्खा विकास बैंकले दसैँमा थप रकम दिन्छांै भनेर प्रतिबद्वता जनाइसकेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्सको ९० प्रतिशत साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप पूरै फिर्ता गर्ने र ठूला निक्षेपकर्तालाई पनि निक्षेपका आधारमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म दिने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा साढे २० हजार निक्षेपकर्तामध्ये १७ हजार साना निक्षेपकर्ता २०/२५ हजारसम्मका भएकाले उनीहरूलाई सबै रकम र ठूला निक्षेककर्तालाई पनि केही रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पिपुल्स फाइनान्सले पनि ऋण उठाएर निक्षेपकर्तालाई दसैँमा थप रकम दिन्छु भनेर केन्द्रीय बैंकमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्सबाट केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषहरूको रकम झिक्दा समस्या परेपछि तीन महिनाका लागि समय थपेको थियो । तर, थपिएको म्याद पनि सकिँदैछ, फेरि समस्याबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम अघि बढाउँछ ?
केही वित्तीय संस्था संस्थागत निक्षेपमा भर पर्दा समस्यामा परेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता संस्थाहरूलाई सर्वसाधारणको निक्षेपका लागि जोड दिएकाले ती संस्थाहरू पनि सोहीअनुरूप अघि बढेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ‘लगानी निर्देशिका’ अनुसार लगानी गर्छ । सार्वजनिक संस्था भएकाले देशको प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुरूप लगानी गर्दा केही वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो परेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको छ । वित्तीय संस्थाले निक्षेपको म्याद सकिएपछि २५ प्रतिशत तत्काल बुझाउनुपर्छ भने ७५ प्रतिशत नवीकरण गर्दै जान सक्छन् । फेरि अर्को पटक पनि २५ प्रतिशत बुझाउने र अरू नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले यसबाट वित्तीय संस्थालाई पनि समस्या हुँदैन र राष्ट्र बैंकको लगानी नीतिले पनि असर पर्दैन ।
अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले निक्षेप झिक्दैमा ती संस्था खराब छन् भन्ने होइन । बैंकले अनुमति दिएका संस्थामा निक्षेप राख्न कुनै पनि समस्या छैन । तर, राष्ट्र बैंकले तत्काल उत्पन्न हुने ‘आपराधिक’ कुराहरूको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । अहिले केही संस्थाहरूमा ठगीसम्बन्धी क्रियाकलाप देखिएर समस्या भएको हो । यस्ता क्रियाकलापहरू छिटो धनी हुने मानवीय प्रवृत्तिको उपजका रूपमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनसाधारण आफू पनि सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले कानुन लागू नभएको र अस्थिर राजनीति भएकाले संक्रमणकालीन अवस्थामा गलत मनोवृपत्त भएकाले फाइदा उठाउन सक्छन्, यसबारे चनाखो हुनुपर्छ । निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्न केन्द्रीय बैंक सधैं सजग छ ।
Posted by Yadav Humagain at 4:21 AM
सुन दुईदिनमा ३५ सय घट्यो
तोलाको ५० हजारभन्दा कम
स्थानीय बजारमा सुनको भाउ दुई दिनमा करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँ सस्तो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारी गिरावट आएपछि आन्तरिक बजारमा तोलाको ५० हजारभन्दा तल झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । यसअघि भदौ अन्त्यमा ५५ हजार नजिक पुगेको थियो ।
संघका अनुसार सोमबार सोमबार सुन १ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ सस्तो भएको छ । आइतबार ५१ हजार ३ सय ५० कायम रहेकामा सोमबार ४९ हजार ८ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । यसअघि साउन अन्त्यमा ४९ हजारको हाराहारीमा रहेको सुन एक महिनामा ५५ हजार नजिक पुगेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पछ्याउँदै अघिल्लो साताबार सुनको भाउ सामान्य घट्न थालेको हो । आइतबार र सोमबार भने मूल्यमा भारी गिरावट आएको नेपाल संघले जनाएको छ । “आइतबार र सोमबार दुई तीनमा सुनको भाउ करिब ४ हजार रुपैयाँ घटेको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो गिरावट आएपछि स्थानीय बजारमा पनि प्रभाव परेको हो ।” अमेरिकी सरकारको राहत प्याकेजका कारण लगानीकर्ता डलरतर्फ आकर्षित भई सुनको भाउ घटेको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि दुई दिनमा सुनको भाउ करिब २ सय डलर घटेर गत जुलाई ८ देखिकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । लगानीकर्तामाझ युरोप्रतिको आशा पलाएकाले सुनको मूल्य प्रतिऔंस १६ सय डलरभन्दा तल झरेको छ । लगानीकर्ताले अन्य सम्पत्तिबाट भएको घाटा पूर्ति गर्न सुन बेचेकाले सुनको मूल्यमा गिरावट आएको हो । विश्लेषकहरूले सुनको भाउ अझै ओरालो लाग्ने आकंलन गरेका छन् ।
यसैगरी सोमबार चाँदीको भाउ पनि ८३ रुपैयाँ घटेको छ । आइतबार प्रतिदस ग्राम ९ सय ४३ रुपैयाँ रहेकामा सोमबार ८ सय ५८ रुपैयाँमा कारोबार भएको संघले जनाएको छ । यसअघि आइतबार पनि चाँदी ४७ रुपैयाँ घटेको थियो ।
Posted by Yadav Humagain at 4:17 AM
१७ लाख निक्षेपकर्ताको ५७ अर्ब निक्षेप सुरक्षित
कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा १७ लाख निक्षेपकर्ताको ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना निक्षेपकर्ताको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउन दिएको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सुरक्षण गराएका हुन् ।
आइतबारसम्म सुरक्षण गराउने कम्पनीको संख्या १ सय ५२ पुगेको निगमका महाप्रबन्धक भोलाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंक १, विकास बैंक ७९, फाइनान्स ७१ र लघुवित्त बैंक १ वटा छन् ।
केन्द्रीय बैंकले फागुन ३ गते ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षदेखि भने वाणिज्य बैंकले पनि सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
“वाणिज्य बैंकहरूलाई चालू आवबाट मात्र सुरक्षण अनिवार्य गरेकाले बैंकहरू आउने क्रम जारी छ” महाप्रवन्धक अधिकारीले भने, “दुर्गम जिल्लाका केही विकास बैंक र फाइनान्सले पनि सुरक्षण गराएका छैनन् ।” गत सातामात्र मेगा बैंकले सुरक्षण गराएको उनले बताए । यसैगरी लघुवित्त विकास बैंकहरू निर्धन उत्थान बैंकले मात्र सुरक्षण गराएको छ । अन्य लघुवित्त बैंकमा व्यक्तिगत निक्षेप खासै नभएकाले विकास बैंकहरू सुरक्षणमा नआएको उनको भनाइ छ ।
Posted by Yadav Humagain at 6:50 AM
सहकारीका साधारणसभामा छड्के
काठमाडौं, २० भदौ सहकारी विभागले सहकारी संस्थाका साधारणसभाको छड्के अनुगमन सुरु गरेको छ । कानुनले तोकेका प्रक्रिया नपु¥याई साधारणसभा गरेको गुनासो बढेपछि नियन्त्रणका लागि अनुगमन थालिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
“सहकारीको सर्वोच्च निकाय साधारणसभा हो,” विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन छड्के अनुगमन थालेका हौं । प्रक्रिया नपु¥याई कागजी रूपमा मात्र साधारणसभा गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक छ ।”
हालसम्म काठमाडौंका आधादर्जन साधारणसभा अनुगमन गरिसकिएको र डिभिजन कार्यालयलाई पनि अनुगमनको निर्देशन दिइएको जानकारी उनले दिए ।
“अनुगमनका क्रममा प्रक्रिया नपु¥याएको र त्रुटि देखिए त्यस्ता संस्थालाई कारबाही गरिन्छ,” उनले भने । साधारणसभामा विभागका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले गत वर्ष भदौदेखि हटाएको थियो । साधारणसभामा जाने प्रतिनिधिले ‘यातायात खर्च’ का रूपमा रकम लिएको गुनासो बढेपछि यो व्यवस्था हटाइएको हो ।
तर, प्रतिनिधि नजाँदा साधारणसभामा अनिमियता बढेको गुनासो आउन थालेपछि छड्के जाँच सुरु गरिएको ढकाल बताउँछन् । “कतिपय संस्थाले सदस्यलाई नै थाहा नदिई साधारणसभा गरेको गुनासा आएका छन्,” उनले भने, “निर्वाचन हुने साधारणसभा त सदस्यलाई जानकारी नै नगराउने समेत गरेको पाइएको छ ।”
Posted by Yadav Humagain at 4:11 AM